Waxaa loo heli karaa soo dejinta Gimp 2.8 | Laga soo bilaabo Linux
Waxaa loo heli karaa soo dejinta Gimp 2.8
Sugitaanku ugu dambeyntii wuu dhammaaday. Kadib laba sano oo horumar ah, horay ayaan ula joognay nooca 2.8 oo ah Tifatiraha Sawirka ugu caansan GNU / Linux: Gimp.
Waxaan fiirinayay websaydhka daqiiqado ka hor mana aysan sameynin ogeysiis rasmi ah wali, si kastaba ha noqotee, waxaad kala soo bixi kartaa noocyadan cusub Gimp FTP. in GimpUsers.com shaqo fiican ayey qabteen (Ingiriisiga) sharaxaya astaamaha cusub, oo aan yareyn. Dhexdooda?
Ikhtiyaarka Kaliya ee Daaqad Daaqad ah (inkasta oo ay tahay ikhtiyaari).
Taageerada tiirar badan.
Tafatirka qoraalka iyadoon la helin wada hadalka soo baxa oo leh xulashooyinka qaabka: D.
Ikhtiyaar si loo abuuro Kooxo lakabyo ah iyo suurtagalnimada in la isku daro ama la midoobo.
Burushka waa la rogi karaa.
Hagaajinta qalabka iyo muuqaalkooda.
Waad xisaabin kartaa astaamaha [(200 + 20 + 20) * 2/3 = 173]: O.
Palette sawir oo loo dhoofin karo CSS, PHP, Java, Python ama qoraal fudud.
Daaqadaha qalabka waa la habeyn karaa.
Tilmaamo cusub oo kumbuyuutar
Websaydhada aasaasiga ah ee cusub ayaa la heli karaa.
Wareegyada midabku waxay muujinayaan kanaallada RGB xagga dambe.
Taageerada JPEG2000 iyo soo dejinta RAW ee 16 bit.
Is dhexgalka GEGL.
Waraaqaha (tilmaame) si loo dejiyo cabirka qalabka.
Screenshots-ka boggaga internetka oo dhameystiran adoo adeegsanaya Webkit.
Ikhtiyaar loo dhoofiyo PDF.
Taageerada bogag badan oo ku jira PDF.
Qalab cusub: Cage Transform [Fiiri video].
Taageero la hagaajiyay oo loogu talagalay kiniiniyada garaafyada ee Wacom.
Inbadan, waxbadan ... 😀
Shaki la'aan, waxaan u maleynayaa in sugitaanku uu uqalmay. Kaliya markaan fiiriyo liiskan balaaran ee isbeddelada ayaa iga dhigaya inaan tijaabiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waxaa loo heli karaa soo dejinta Gimp 2.8
Akhbaar aad u fiican iyo sida aan u arko inay aad uga muhiimsan tahay sii deynta wax kasta oo la qaybiyo.Gimp waa mid ka mid ah barnaamijyada astaanta u ah Software-ka Bilaashka ah.
Akhbaar aad u fiican iyo shaqo weyn oo ka timid horumariyeyaasha. Shaki la'aan, barnaamij weyn oo loogu talagalay Barnaamijka Bilaashka ah.
Yujuuuuu !! Waxaan horeyba u haysannay nooca 2.8 oo leh daaqad keliya !!
Ku jawaab DonPito
Qalab cusub: Cage Transform <- dadku hadda waxay awoodi doonaan inay ka saaraan calooshooda sawiradooda muraayada hortooda iyagoo wata software bilaash ah! ? (?)
HA HA HA JA Sida saxda. Waxay dhihi karaan "sawirkaas waa la cadaadiyey!"
gimp 2.8, run ma noqon karto, waa inuu ahaadaa dhalanteed xD
Waad salaaman tahay, ma iga caawin kartaa inaan ku rakibo Linux-pae qaansoleyda maxaa yeelay qalad ayaan helayaa markii aan rakibayo iyo tan tan maxaa yeelay markaad isku dayayso inaad ku rakibo 64-bit arch ee dhabta dhabta xps15z ma shaqeyneyso markii dib loo bilaabayo ka dib markii la rakibayo nidaamka aasaasiga ah, Kumbuyuutarka aniga ilama shaqeynayo sidaa darteed waxaan doortay inaan rakibo nooca 32-bit ah, runtiina, midkoodna ubuntu 64-bit ma ii shaqeynayo aniga iyo tan oo dhan si uu u aqoonsado 8gb ee xusuusta wananka fadlan caawi
Aniga maahan ... nasiib daro waan cusbooneysiiyey GIMP Iyada oo loo marayo Maareeyaha Cusboonaysiinta:
1.-Waxaan rakibay waxyaabo taxane ah oo sida muuqata la cusbooneysiiyay GIMP
2.-Laakiin oh, la yaab! ... wuu ka saaray oo hadda anigu ma haysto nooc ka mid ah GIMP
3.-Iyo waliba, hadda xitaa ma rakibi karo ...
Maaha markii ugu horreysay ee ay sidan oo kale igu dhacdo, dhawr bilood ka hor ayay ahayd inaan dib u rakibo nidaamka oo dhan mar kale si aan u awoodo inaan rakibo GIMP, laakiin markan ma doonayo inaan sameeyo ama ma doonayo inaan waqtigayga ku lumiyo ...
Aptitude wuxuu qabtaa ku tiirsanaanta ka fiican apt-get shaqsiyanna kama cusbooneysiin lahaa ppa.
Uma maleynayo inay lagama maarmaan tahay in dib loo rakibo nidaamka, laga saaro xirmooyinka dhibaatada keena ka dibna dib loo rakibo gimp.
Waa inay noqotaa mid fudud.
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada.
Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan cadeeyo in xirfadeyda ay tahay naqshadeynta garaafka oo aanan wax badan ka aqoon nidaamyada hawlgalka -sida 99% naqshadeeyayaasha garaafka ah waan ogahay- oo intii aan qabtay oo dhan waxay kicisay cusbooneysiin aan loo maleyneynin inay dhibaato leedahay. Haddii kale amarka apt-hel rakib gimp waa midka lagu soo jeediyay bogga rasmiga ah ee GIMP
Sideen ku ogaadaa waxa ay yihiin baakadaha burburay?
Waa inay noqotaa mid fudud ... laakiin tani waa Linux.
I tusi qoriga ku siiya marka aad furto, fiiri haddii aan aniga qudhaydu wax qaban karo
Ma furi karo, cusbooneysiinta nacaladda ayaa iska fogeysay GIMP Waan haystay, ma rakibin midka cusub mana ii oggolaanayo inaan rakibo nooca cusub sababo la xiriira ku-tiirsanaan.
Ma isticmaashaa wax PPA ah?
Haa, kan: otto-kesselgulasch / gimp
Hubaal, taasi waa dhibaatada.
On Linux Mint forums waxaa ku jira qof qaba dhibaato isku mid ah.
Jawaabaha midkood ayaa sheegaya inay jiraan dhibaatooyin ku tiirsanaanta (waxaad ii sheegto) iyo inay yihiin kuwo culus.
Taladaydu waa inaan sugo in si rasmi ah loogu daro keydadka Linux Mint, haddii aysan ku jirin meelaha wax lagu keydiyo waa wax
Nasiib wanaag… WAQTIGA... kuma tiirsana GIMP shaqooyinka wax soo saarka -que GIMP aniga igama shaqeyso Linux MintNot ma haysto qiimaha hooyo, bixi rukhsaddayda qayb ka mid ah AdobeMarka la fiiriyo waxyaabaha kor ku xusan, qiimihiisu aad buu uga yar yahay. Wixii kale oo dhan waa Master Card-.
Waad ku mahadsan tihiin kun taageeradiina Courage, Ugu dambayntii waan sugi doonaa Linux Mint Maya oo aan horeyba u rakibey wax walba oo cusub waxaan ku dari doonaa markale GIMP. Mahadsanid kun markale.
Marka waxaan sheegay inaanan ka cusbooneysiin lahayn ppa.
Kaliya iska nadiifi wax kasta oo la xiriira gimp (xitaa marka la qabsado terminal-ka waxaa jira xirmooyin sababa isku dhac), taasna way ku fududahay synaptic (Ma aqaano haddii lagu rakibay liinikada Linux), ka dibna tirtir ppa, dib u cusbooneysii kaydinta iyo dib u soo celinta gimp.
Waxyaabaha ku saabsan apt-get waa sababta oo ah ubuntu dhowaan ma laha aptitude rakibtay mar dambe (si gooni ah ayaa loo rakibi karaa haddii aad rabto), taasi waa sababta bogga gimp.
Dibi hore ... waxay umuuqataa, markaa, in cusbooneysiinta a PPA waa sida sanduuqa shukulaatada Gasho: ma ogid waxa ku taabanaya.
Maya, ma sahlana sidaas. Haddaan uninstall libgtk2.0 Waxaan rartaa miiska ... waxyaabaha kale sooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Sida farriinteydii ugu dambeysay ee arintan lumisay.
Ku rakib karti (apt-get install aptitude)
Kadibna: cusbooneysiinta && aqoonta khibrad-casriyayn && aptitude cusbooneysiin && aptitude full-upgrade
Hayso haddii kor ku xusan ay hagaajiso ku tiirsanaanta burburiyey pam gimp, haddii aan la isticmaalin ppa purge (muddo dheer ayaan u adeegsaday, waxaan u maleynayaa ubuntu tweak), inaad ku noqoto xirmooyinka asalka ah ee distro (kuwa aan cusbooneysiiyo gimp ppa) .
Iyo ugu dambeyntii dib-u-cusbooneysiinta gimp.
Taasi way ka maqan tahay apt-get / aptitude, adoo isticmaalaya repos kale mid ayaa ka dooran kara meesha lagu rakibo xirmo gaar ah sida OpenSUSE's yast2 / zypper. Ama hadaad ikhtiyaar leedahay, kuma aanan soo marin.
Mahadsanid kun Courage y leeg84 taageeradaada.
Waxaan isku dayi doonaa waxaad soo jeediso leeg84, si loo arko sida ay u shaqeyso.
Mahadsanid kun, markale.
Dulqaad baad ahayd. Horumarinta GIMP waxay kugula talinayaan rakibida nooca xasilloon ee keydka rasmiga ah. Waxaa loo heli doonaa Ubuntu waqti aan dheereyn. Kaliya waa inaad sugto maareeyaha cusbooneysiinta inuu ku ogeysiiyo. Newbie-ku kuma qasmi karo keydadka tijaabada ah.
Sidoo kale, haddii aad arki lahayd bogga kaydinta waxaad akhrin lahayd tan:
PPA-kan ayaa jebin kara OS-kaaga rakibay. Waxaa jira arrimo ku tiirsanaan gaar ahaan Oneiric (11.10). Kaliya isticmaal hadaad ogtahay waxaad qabato! Waxaan dadka kale kula shaqeynayaa xalka xasilloon ee lagu kalsoonaan karo
Kaliya waa inaad sugto maareeyaha cusbooneysiinta inuu ku ogeysiiyo
Taasi waa waxa aan sameeyay ... miyaadan akhriyin?:
... la cusbooneysiiyay GIMP Iyada oo loo marayo Maareeyaha Cusboonaysiinta...
Hadday tahay Maareeyaha Cusboonaysiinta Waxay iiga digaysaa cusbooneysiintan, waxaa loo maleynayaa inaanan ahayn inaan dib u eego iyo / ama aqriyo inay dhib keeni karto iyo inkale ... Waan fahamsanahay haddii aan ku rakibo qunsuliyada.
Intaa waxaa dheer, xitaa ma aanan ogeyn in noocaan cusub uu horey u jiray ilaa Maareeyaha Cusboonaysiinta wuu iiga digay, laakiin sikastaba ... waa maxay Linux ma xuma, dadka isticmaala laylis ugu dambayn waa kuwa xirmo ** os
Waxaa laga yaabaa inaan horey kuugu fahmay. Waxaan u maleynayaa inaad ku rakibtay ppa ka:
Ku rakibidda bakhaarkaas ayaa si otomaatig ah u hawlgelinaya. Maamulaha cusbooneysiinta wuxuu raadiyaa cusbooneysiinta dhammaan keydadkaaga firfircoon (ha ahaado mid rasmi ah ama mid aan ahayn). Hadday u dhacday sidii aan u qoray… Haa, adaa iska leh adigu. Kaydintaas waa inay u noqotaa midho mamnuuc u ah kuwa aan aqoonta u lahayn.
Haddii Maamulaha Cusboonaysiinta uu igu wargeliyo cusbooneysiintan, waxaa loo qaatay inaanan ahayn inaan dib-u-eegis ku sameeyo iyo / ama akhriyo haddii ay dhibaato keeni karto iyo in kale ... Waan fahamsanahay haddii aan ku rakibo qunsuliyada.
Tan waxaad ku saxan tahay laakiin qayb ahaan, tani waxay guud ahaan khuseysaa softiweerka ku jira keydka rasmiga ah, laakiin isla marka aad ku darto ppa-yada kugu xiran adiga, adiga ayaa mas'uul ka ah ogaanshaha dhibaatooyinka ay keydkaasi keydka u hayaan dhinacyada saddexaad.
Waxa aan kugula talinayo ayaa ah inaad ka saarto xirmooyinka jaban ee aad haysato, ka saar ppa-ga ilaha softiweerka, nadiifi qafiska saxda ah kana saar baakadaha aan loo baahnayn:
oo isku day inaad mar kale ku rakibto gimp, taas oo ka soo dejisan doonta baakadaha meydadka Mint markale.
isticmaaleyaasha layliska ugu dambayntii waa pend ** os
Maaha taas, waxa dhacaya ayaa ah in tikniyoolajiyadda casriga ahi ay leeyihiin dhalinyarada
Waxaan fahansanahay in dhacdo aan fiicnayn ay qofka ka cadhaysiin karto. Sida aan u xanaaqsanahay markaan kursiga dul maro oo aan lugta dhaawaco. Waan habaarayaa kursi sameeyaha iyo geedka uu ka yimid, laakiin waxaan ogahay inay khalad igu ahayd inaanan eegin meesha aan joogo. Sidoo kale kuma eedeyn karno Linux ama GIMP wax isticmaale khalad sameeyey. Mar, anigoo adeegsanaya Internet Explorer, waxaan si qalad ah u rakibey furin. Waxay bedeshay boggeyga gurigayga waxayna u furtay pop-up bidix iyo midig. Ciladdu ma ahayn Windows 98 ama IE. Aniga ayaa mas'uul ka ahaa, weligay qalad la mid ah weligay ma gelin.
In Linux chakra horey ayaan u heynaa 🙂
Sip dhex mari xirmooyinka, waxay u fiican tahay qashin qaadista, tallaabo yar laakiin horumar weyn ayaa u ah waxa hadda ka imanaya gimp.
Ma jiraan "midho reebban" oo aqoonta ah. Jidka waxbarashadu waa dariiq tijaabo iyo qalad ah, qofkasta oo istaaga isagoo ka baqaya "wax jabiya" weligiis ma hormaro. Isagoo iska dhigaya "mamnuucaya" taabashada shay oo u ilaaliya "kaliya aqoonyahanada" waa dabeecad elitist.
Haddii kuwa "og" ay leeyihiin wax ay ku darsadaan kuwa isku dayaya inay qalad sameeyaan, sida nooc kasta oo aqoon ah, waa hagaag; Haddii, dhinaca kale, ay kugu dhibto inaad caawiso dadka kale, waxaa fiican inaad iska aamusto oo aanad waxba ku darsan ka hor intaadan isku deyin inaad xakameyso.
Ma rabtaa biraawsar yar yar? Python waa xalka
7da ugu wanaagsan ee loo qaybiyo GNU / Linux sanadkii 2012